လေဆာဖြတ်နည်း Acrylic (Acrylic Cutting & Engraving) - MimoWork
အဝတ်အထည်နှင့် အိမ်သုံး အထည်အလိပ်များ
Template Matching စနစ်
ပစ္စည်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက် - Acrylic
လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း Acrylic (PMMA)
Acrylic တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း။
နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် လေဆာစွမ်းအား တိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ၊ လက်စွဲနှင့် စက်မှုသုံး acrylic စက်ပစ္စည်းများတွင် CO2 လေဆာနည်းပညာသည် ပိုမိုခိုင်မာလာသည်။၎င်း၏သွန်း (GS) သို့မဟုတ် extruded (XT) acrylic glass ဖြစ်ပါစေ၊လေဆာသည် သမားရိုးကျ ကြိတ်စက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကုန်ကျစရိတ် သိသိသာသာ သက်သာစွာဖြင့် Acrylic ကို ဖြတ် ထွင်း ထွင်းထုရန် အကောင်းဆုံး ကိရိယာ ဖြစ်သည်။ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို နက်နဲစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊MimoWork လေဆာဖြတ်စက်များစိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများဒီဇိုင်းနှင့်သင့်လျော်သောပါဝါကွဲပြားခြားနားသောအပြောင်းအလဲနဲ့လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံနိုင်ပါသည်, ရလဒ်နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသော acrylic workpiecesကြည်လင်ပြတ်သားသော အစွန်းများsingles လည်ပတ်မှုတွင်၊ အပိုထပ်ဆောင်းမီးတောက်ခြင်းပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသာမက လေဆာထွင်းထုခြင်းသည် သင့်ဒီဇိုင်းကို ကြွယ်ဝစေပြီး နူးညံ့သိမ်မွေ့သောပုံစံများဖြင့် အခမဲ့ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။လေဆာဖြတ်စက်နှင့် လေဆာကမ္ပည်းထိုးခြင်း။သင်၏ နှိုင်းယှဉ်၍မရသော vector နှင့် pixel ဒီဇိုင်းများကို အကန့်အသတ်မရှိ စိတ်ကြိုက် acrylic ထုတ်ကုန်များအဖြစ်သို့ အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
တော်သေးတာပေါ့၊acrylic ပုံနှိပ်ပုံစံဖြင့် တိကျစွာ ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။Optical Recognition စနစ်များ. ကြော်ငြာဘုတ်၊ နေ့စဥ်အလှဆင်မှုများနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်နှိပ်ထားသော acrylic ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အမှတ်တရလက်ဆောင်များပင်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် မြန်နှုန်းမြင့်ခြင်းနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းနှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် အောင်မြင်နိုင်သည်။သင်၏စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းအဖြစ် ပုံနှိပ်ထားသော acrylic ကို လေဆာဖြတ်နိုင်ပြီး ၎င်းသည် အဆင်ပြေပြီး မြင့်မားသော ထိရောက်မှုရှိသည်။
Acrylic လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် ဗီဒီယိုတစ်ချက်
Acrylic ပေါ်တွင် လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ထွင်းထုခြင်းဆိုင်ရာ နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများကို တွင် ရှာဖွေပါ။ဗီဒီယိုပြခန်း
1. ပိုမိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော acrylic စာရွက်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖြတ်တောက်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိနိုင်သည်။
2. သင့်ပုံစံ၏အစွန်းများသည် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းခြင်းမရှိသင့်ပါ။
3. မီးတောက်အစွန်းများအတွက် မှန်ကန်သောပါဝါရှိသော လေဆာဖြတ်စက်ကို ရွေးချယ်ပါ။
4. အပူပျံ့ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် မှုတ်ခြင်းအား တတ်နိုင်သမျှ အနည်းငယ် ထားသင့်ပါသည်။
Acrylic ပေါ်တွင် လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် လေဆာထွင်းခြင်းအတွက် မေးခွန်းများ ရှိပါသလား။
သင့်အတွက် နောက်ထပ် အကြံဉာဏ်များနှင့် ဖြေရှင်းချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။
Acrylic လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ကို အကြံပြုထားသည်။
သေးငယ်သော Acrylic လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
(Acrylic လေဆာ ထွင်းထုစက်)
အဓိကအားဖြင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ထွင်းထုခြင်းတို့အတွက် ဖြစ်သည်။မတူညီသော ပစ္စည်းများအတွက် မတူညီသော အလုပ်ပလက်ဖောင်းများကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ဒီမော်ဒယ်က ဆိုင်းဘုတ်တွေအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားတာပါ...
ကြီးမားသောပုံစံ Acrylic လေဆာဖြတ်စက်
ကြီးမားသောပုံစံအစိုင်အခဲပစ္စည်းများအတွက် အကောင်းဆုံး entry-level မော်ဒယ်၊ ဤစက်ကို လေးဘက်လုံးသို့ ဝင်ရောက်နိုင်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အကန့်အသတ်မရှိ သယ်ဆောင်ခြင်းနှင့် သယ်ဆောင်ခြင်းများကို ခွင့်ပြုပေးသည်...
Galvo Acrylic လေဆာကမ္ပည်းထိုး
သတ္တုမဟုတ်သော အလုပ်ခွင်များတွင် အမှတ်အသား သို့မဟုတ် အနမ်းဖြတ်ခြင်းအတွက် စံပြရွေးချယ်မှု။GALVO ဦးခေါင်းကို သင့်ပစ္စည်းအရွယ်အစားအလိုက် ဒေါင်လိုက်ချိန်ညှိနိုင်သည်...
>> လေဆာစနစ်များကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။
Acrylic အတွက် လေဆာလုပ်ဆောင်ခြင်း။
1. Acrylic ပေါ်တွင် လေဆာဖြတ်ခြင်း။
မှန်ကန်ပြီး မှန်ကန်သော လေဆာပါဝါသည် acrylic ပစ္စည်းများမှတဆင့် အပူစွမ်းအင်ကို တူညီစွာ အရည်ပျော်စေကြောင်း အာမခံပါသည်။တိကျသောဖြတ်တောက်မှုနှင့် ကောင်းမွန်သော လေဆာရောင်ခြည်များသည် မီးတောက်-ပွတ်အစွန်းဖြင့် ထူးခြားသော acrylic အနုပညာလက်ရာကို ဖန်တီးသည်။
2. Acrylic ပေါ်တွင် လေဆာ ထွင်းထုခြင်း။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စိတ်ကြိုက်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းမှ acrylic ပေါ်တွင်လက်တွေ့ကျသောထွင်းထုပုံစံအထိအခမဲ့နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နားလည်မှု။အနုစိတ်ပြီး သိမ်မွေ့သောပုံစံကို တစ်ချိန်တည်းမှာပင် acrylic မျက်နှာပြင်ကို ညစ်ညမ်းစေပြီး မပျက်စီးစေသည့် ကြွယ်ဝသောအသေးစိတ်အချက်များဖြင့် လေဆာဖြင့် ထွင်းထုနိုင်ပါသည်။
Laser Cutting Acrylic Sheets မှ အကျိုးကျေးဇူးများ
ပွတ်တိုက် & ပုံဆောင်ခဲအစွန်း
✔ တိကျသောပုံစံဖြတ်တောက်ခြင်း။အတူoptical အသိအမှတ်ပြုစနစ်များ
✔Flexible processing တွေအတွက်မည်သည့်ပုံစံသို့မဟုတ်ပုံစံ
✔ No ကြောင့် acrylic ကို ကုပ်ရန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည်။ထိတွေ့မှုမဲ့ လုပ်ဆောင်ခြင်း။
✔ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ခြင်း။အစာကျွေးခြင်းမှ ဖြတ်တောက်ခြင်းမှ လက်ခံခြင်းအထိ shuttle အလုပ်စားပွဲ
လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ထုထွင်းထုခြင်းအတွက် သာမာန်အသုံးအဆောင်များ
• Architectural Model ဆောက်လုပ်ရေး
• ပရင့်ထုတ်ထားသော Acrylic
• လက်လီရောင်းချသူ လက္ခဏာများ
• Sprue ဖယ်ရှားခြင်း။
လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း Acrylic ပစ္စည်းအချက်အလက်
ပေါ့ပါးသောပစ္စည်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ acrylic သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝ၏ရှုထောင့်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများလယ်ကွင်းနှင့်ကြော်ငြာနှင့်လက်ဆောင်များ၎င်း၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် တိုင်ကြားခဲ့သည်။အလွန်ကောင်းမွန်သော အလင်းဖောက်မြင်နိုင်မှု၊ မြင့်မားသော မာကျောမှု၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ ပုံနှိပ်နိုင်မှုနှင့် အခြားဝိသေသလက္ခဏာများသည် acrylic ထုတ်လုပ်မှုကို တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးလာစေသည်။တစ်ချို့ကို တွေ့နိုင်တယ်။မီးပုံးများ၊ ဆိုင်းဘုတ်များ၊ ကွင်းများ၊ အဆင်တန်ဆာများနှင့် acrylic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ.ထိုမျှသာမက၊UV acrylic ပုံနှိပ်ကြွယ်ဝသောအရောင်နှင့်ပုံစံများသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် universal ဖြစ်ပြီး ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းကို ပေါင်းထည့်ပါသည်။ရွေးချယ်ခြင်းသည် အလွန်ပညာရှိပေ၏။လေဆာစနစ်များacrylic ၏ဘက်စုံသုံးနိုင်မှုနှင့် လေဆာလုပ်ဆောင်ခြင်း၏ အားသာချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ acrylic ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ထွင်းထုရန်။
စျေးကွက်တွင် အသုံးများသော Acrylic အမှတ်တံဆိပ်များ
PLEXIGLAS®၊ Altuglas®၊ Acrylite®၊ CryluxTM၊ Crylon®၊ Madre Perla®၊ Oroglas®၊ Perspex®၊ Plaskolite®၊ Plazit®၊ Quinn®
acrylic စိတ်ကြိုက်လေဆာဖြတ်နည်း။လေဆာထွင်းခြင်းဆိုသည်မှာ ကြည်လင်သော acrylic ဖြစ်သည် ။ပိုမိုလေ့လာရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။